Thenga i-Bitcoin nge-i-Austria ngokushesha Nangokuphephile | I-Paxful
Thenga i-Bitcoin ngokushesha ku-i-Austria
Izimali eziyidijithali ziyachuma kulo lonke elase-Europe njengoba izilinganiso zokuhweba ziye zakhuphuka ezinyangeni ezimbalwa ezidlule. Kungakhathaliseki ukuthi uhlele ukusebenzisa i-Bitcoin ngezinjongo zokuqagela, ukonga umnotho, noma enye indlela oyibona ifanele, akukephuzi ukujoyina lolu shintsho lwezezimali.
Ku-Paxful, ukuthenga i-Bitcoin e-Austria kulula futhi kuyazuzisa njengoba ungeke ukhokhe zindleko ezengeziwe, kunanezindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300 ongakhetha kuzo. Njengoba kunezinqubo zokuphepha ezisezingeni eliphezulu kakhulu kanye nenqubo ye-KYC eqhelisa abantu abayingozi emakethe, siye saqinisekisa ukuthi uthenga i-Bitcoin endaweni ephephile.
Vula i-akhawunti yakho ye-Paxful namuhla futhi uthenge i-BTC yakho yokuqala.
Okuthengiswayo okuphezulu kwe-Euro e-i-Austria
Inani Elincane—Inani Eliphezulu
Ungathenga noma iyiphi ingxenyana
Ukubonwa ngemizuzu engu-36 ago I-PayPal — Goods and Services
ukukhokha ku-inthanethi akukho zinkampani eziseceleni Paxful 6
15,20,30 EUR 15 EUR $0.99 Thenga 33,923.86 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-3 ago I-PayPal — Instant Release
40.00-150.00 EUR 40.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-11 ago I-PayPal — INSTANT RELEASE
akudingeki marisidi Akukho kuqinisekisa okudingekayo ukukhokha ku-inthanethi
10.00-100.00 EUR 10.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa ngemizuzu engu-37 ago I-Western Union — Fast Release
500.00-1,000.00 EUR 500.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-8 ago I-PayPal — Honesty and trustworthy
Akukho kuqinisekisa okudingekayo ukukhokha ku-inthanethi
20.00-141.00 EUR 20.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ku-inthanethi I-Western Union — No negotiation
100.00-319.00 EUR 100.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-10 ago I-PayPal — after successful cashout
ukukhokha ku-inthanethi abangane nomndeni
10.00-55.00 EUR 10.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-17 ago I-PayPal — release after cash out
50.00-53.00 EUR 50.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-6 ago I-PayPal — INSTANT RELEASE
30.00-39.00 EUR 30.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-10 ago I-PayPal — Instant release
30.00-300.00 EUR 30.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa ngemizuzu engu-41 ago I-Western Union — quick
50.00-221.00 EUR 50.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Akukho kuqinisekisa okudingekayo abangane nomndeni
45.00-191.00 EUR 45.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-3 ago I-PayPal — Immediate release
akudingeki marisidi abangane nomndeni
25.00-51.00 EUR 25.00 EUR $0.81 Thenga 41,313.21 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-2 ago I-Western Union — Bank Release in 10Mins
50.00-1,000.00 EUR 50.00 EUR $0.81 Thenga 41,380.39 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa ngemizuzu engu-20 ago I-PayPal — instantly release
akudingeki marisidi akukho kuxoxisana
15.00-16.00 EUR 15.00 EUR $0.81 Thenga 41,649.09 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa amahora angu-2 ago I-Western Union — quick
18.00-77.00 EUR 18.00 EUR $0.81 Thenga 41,649.09 EUR Thenga Thenga
Ku-inthanethi I-PayPal — Instant release
akudingeki marisidi ukukhokha ku-inthanethi
50.00-250.00 EUR 50.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ku-inthanethi I-PayPal — release after cash out
40.00-68.00 EUR 40.00 EUR $0.82 Thenga 40,977.33 EUR Thenga Thenga
Ku-inthanethi I-PayPal — ALWAYS Fast and Reliable
10.00-835.00 EUR 10.00 EUR $0.80 Thenga 41,817.03 EUR Thenga Thenga
Ukubonwa ngemizuzu engu-2 ago I-PayPal — INSTANT PAYMENT
i-paypal eqinisekisiwe kuphela
30.00-100.00 EUR 30.00 EUR $0.83 Thenga 40,641.45 EUR Thenga Thenga
Izindlela zokukhokha ezihamba phambili e-i-Austria
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- I-PayPal namuhla.
Thenga i-Bitcoin nge-I-PayPal
Ukuthumela Imali Ebhange
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- Ukuthumela Imali Ebhange namuhla.
Thenga i-Bitcoin nge-Ukuthumela Imali Ebhange
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- I-Revolut namuhla.
Thenga i-Bitcoin nge-I-Revolut
NOMA YILIPHI Ikhadi leKhredithi/leDebhithi
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- NOMA YILIPHI Ikhadi leKhredithi/leDebhithi namuhla.
Thenga i-Bitcoin nge-NOMA YILIPHI Ikhadi leKhredithi/leDebhithi
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- I-Western Union namuhla.
Thenga i-Bitcoin nge-I-Western Union
I-Paxful yenza kubelula futhi kuphephe kuwe ukuthenga nokubamba i-cryptocurrency. Thola umnikelo ophambili ngezansi futhi uthenge i-cryptocurrency nge- I-SEPA namuhla.
Thenga i-Bitcoin nge-I-SEPA
I-Paxful iyimakethe ye-Bitcon ye-Peer to Peer exhuma abathengi nabathengisi. Kalula nje khetha indlela ofuna ukukhokha ngayo futhi uthayiphe ukuthi udinga ama-Bitcoin angakanani.
Umsebenzi wethu ukunikeza abantu abasebenzayo inkundla ephephile, enobulungisa nevikelekile yokuhweba inani lomsebenzi wabo. Izinkinga zethu eziningi zibangelwa yimali, ukuyithola nokuyithutha. Sizibophezele ukuthuthukisa abantu ngokwakha inkundla yokukhokha emhlabeni kabanzi ye-peer to peer. I-Paxful iyi-PayPal + Uber kanye ne-Wall Street yabantu.
Ngingakwazi yini ukuthengisa i-Bitcoin ku-Paxful?
Siza abanye abantu e-i-Austria bathole i-Bitcoin futhi ungathola inzuzo ENKULU efinyelela ku-60% entweni ngayinye ethengiswayo. Qala ukuthengisa nge-akhawunti yakho yasebhange esendaweni, bona umhlahlandlela wethu wamahhala. I-Paxful ithola abathengi abayizi-1000 abavela e-i-Austria usuku ngalunye.
Vula i-akhawunti futhi uqale ukuthengisa
Zuza Imali Ngaphandle Kokukhandleka
Ingabe wazi abantu abaningi abafuna ukuthenga i-Bitcoin e-i-Austria? Nge-Bitcoin Kiosk kanye Nohlelo lwenxusa uzuza-2% ekuhwebeni ngakunye phakade ngokwabelana nje ngelinki. Qala manje.
Thenga i-Bitcoin manje ngendlela yakho yokuthenga oyithandayo Thenga i-Bitcoin manje